कुनै या’त्रामा जानु अघि यी ची’ज देख्नुभयो भने बुझ्नुहोस् तपाईंको यात्रा शु’भ हुने प’क्का छ ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठरोचककुनै या’त्रामा जानु अघि यी ची’ज देख्नुभयो भने बुझ्नुहोस् तपाईंको यात्रा शु’भ हुने प’क्का छ !
चा’हे यात्रा कामको शि’लशिलामा होस् या घु’म्नको लागि हरेक मानिस यात्राको आ’रम्भ गर्नु अघि आफ्नो यात्रा शु’भ र स’फल रहोस् भन्ने चाहन्छ। त्यसैले पनि मानिसहरु घर बाहिर नि’स्कँदा शुभ र अ’शुभको ध्यान राख्छन्। यात्राको प्रा’रम्भ गर्नु अघि मिल्ने सं’केतका अनुसार मानिसहरू शुभ र अ’शुभ ठा’न्दछन्। आज हामी तपाईंलाई यस्तै केहि चि’जका बारेमा बताउँछौं जुन चि’ज तपाईंले यात्रा गर्नु अघि देख्नुभयो भने सो’च्नुहोस् कि तपाईंको यात्रा नि’कै शुभ हु’नेवाला छ।
यदि गाई, घो’डा, हात्ती आदि प’शु देख्नुभयो भने यो यात्राको शु’भताको सं’केत हो। त्यस्तै, यदि या’त्राको लागि जाँदै गर्दा दे’वको मू’र्ति, आ’गो, ज्वा’ला, सुन, चाँदी र र’त्नहरू आदि देखिन्छन् भने तब तपाईंको यात्रा शुभ रहन्छ। यदि कुनै प्रकारको यात्रा गर्नु अघि तपाईंले दु’वो, ता’जा गो’बर, औ’षधि, मुं’ग, फल, घिउ, दही, दूध देख्नुभयो भने बु’झ्नुहोस् कि तपाईंको यात्रा शुभ हु’नेवाला छ। यदि तपाईंले कुनै कामको लागि घरबाट नि’स्किने क्रममा शं’ख, ब्या’ण्ड बाजा तथा मे’घ ग’र्जनको ध्व’नि सुन्नुभयो भने यसलाई नि’कै शु’भ मानिन्छ।
यस्तोमा यात्राको क्र’ममा लक्ष्मी प्राप्त हुनेछ। या’त्राको क्रममा मृ-त व्यक्तिको अ’न्तिम यात्रा, गाईलाई उसको बा’छोसँग दे’खियो भने उक्त यात्रा नि’कै शुभ हु’नेछ। यी ची’जहरूको दृश्यले तपाईंको स’मस्यामा आउने स’बै स’मस्याहरूलाई न-ष्ट गर्दछ। यस्तो यात्रा धेरै शु’भ हुन्छ जब यात्राको समयमा म’ह वा उ’खु देखि’न्छ। यदि धन सम्बन्धि यात्राको क्र’ममा यस्तो देखिन्छ भने आ’र्थिक ला’भको स’म्भावना रहन्छ।
झा’डीबाट राती आवाज आउँदा कसैले वा’स्ता गरेनन्, बिहानपख हेर्दा ठूलो प’छुतो-
यस्तो चि’उडो भएकी युवतीसँग विहे गर्नुहोस्, तपाईको भा’ग्य च’म्किनेछ